လီဗာပူးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်မယ်ဆိုလို အလှောင်ခံရတဲ့ ဟာမီတန် ၊ နိုင်ပွဲပြန်ရတဲ့ ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
လီဗာပူးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ချဲလ်ဆီးကို ဝယ်မယ်ဆိုလို အလှောင်ခံရတဲ့ ဟာမီတန် ၊ နိုင်ပွဲပြန်ရတဲ့ ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ မကြာခင် ရက်ပိုင်းကမှ မွေးဖွား ခဲ့တဲ့ သမီးငယ်လေး ရဲ့ ပထမဆုံး ပုံကို မိသားစု ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးရင်း ပြသ သွားခဲ့ပါတယ် ။
ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဇနီးသည် ဟာ အမွှာကိုယ်ဝန် လွယ်ထားခဲ့ပေမယ့် သားငယ်လေး ဟာ မွေးဖွားစဉ်မှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ လီဗာပူး နဲ့ ပွဲမှာ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေဟာ ပွဲချိန် ၇ မိနစ်မှာ ‘You’ll never walk alone’ တေးသွားကို သီဆို ခဲ့ပြီး ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု နဲ့ အတူ ထပ်တူခံစားရကြောင်းကို ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ကလည်း အန်ဖီးလ် က လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ လမ်းခွဲ တော့မယ့် ဝေးလ် တောင်ပံ ကစားသမားကြီး ဂါရတ် ဘေးလ် ကို အမေရိက ကလပ် ဒီစီ ယူနိုက်တက် က ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ရဲ့ အီတလီ ခံစစ်မှူးကြီး ချီယာလီနီ ဟာလည်း လက်ရှိ စာချုပ် ကုန်ဆုံးချိန်မှာ တုရင် ကလပ် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိတ်ကူး ထားပြီး အမေရိက မှာ သွားရောက် ကစားဖို့ ကိုလည်း စဉ်းစား နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် ဒါရိုက်တာ ကတော့ ဥရောပ ထိပ်သီးတွေ စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ အန်ကွန်ကူ ဟာ လာမယ့် ရာသီမှာလည်း သူတို့ ကစားသမားသာ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကို ရှုံးနိမ့် အပြီးမှာ မန်ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး ဟယ်ရီမက်ဂွဲယား နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစု တို့ဟာ အသက် အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်တဲ့ စာတွေကို လက်ခံ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ ကွန်တီ ဟာ လာမယ့် နွေရာသီမှာ ကွင်းလယ်ကို အနည်းဆုံး လူသစ် ၂ ယောက် ခေါ်ယူ ဖြည့်တင်းဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပြီး အသင်းသားဟောင်း အဲရစ်ဆင် ၊ လိဒ် ရဲ့ ကယ်ဗင် ဖိလစ် တို့ အပါအဝင် ကစားသမား ၆ ဦးလောက်ကို လေ့လာ အကဲခတ် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းနဲ့ ပွဲမှာ ခြေထောက် ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရရှိခဲ့တဲ့ ဘန်လေ ကစားသမား အက်ရှ်လေ ဝက်စ်ဝုဒ် က သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာကို ကောင်းစွာ ခွဲစိတ် နိုင်ခဲ့ကြောင်း အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာကျော် ပြိုင်ကားမောင်း ချန်ပီယံ ဆာ လူးဝစ် ဟာမီတန် ရဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ဝယ်ယူမယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ် အပြီးမှာ ဖော်မြူလာဝမ်း ပြိုင်ကားမောင်း အကျော်အတော် တယောက် ဖြစ်တဲ့ ဗာစတပ်ဗန် က ဟာမီလ်တန် ဟာ အာဆင်နယ် ပရိသတ် လို့ ကြားဖူးကြောင်း နဲ့ ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်မယ့် ကိစ္စ ဟာ သူ့ကို အံ့အားသင့် စေကြောင်း ၊ သူဟာ PSV ပရိသတ် ဖြစ်ပြီး အိုင်ယက်စ် ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆို ရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဆာ လူးဝစ် ဟာမီလ်တန် ဟာ နာမည်ကျော် တင်းနစ် ချန်ပီယံ ဆရီနာ ဝီလ်ယံ နဲ့ အတူ ဘီလီယံနာ မာတင် ဘရော့တွန် ရဲ့ ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်ယူရေးမှာ ပေါင် ၁၀ သန်းစီ ပူးပေါင်း ပါဝင် ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကနေ ထွက်လာမယ့် ထိပ်တန်း ခံစစ်မှူး အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပိုမို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဆဲလ်တစ် ကြယ်ပွင့်လေး ဘန်ဒွတ် ဟာ သူ့ရဲ့ ပေါင် ၆ သိန်းတန် လီဗာပူး အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ပြီးမြောက်အောင်မြင် ခဲ့ကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကနေ အသိပေး ဖော်ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် နဲ့ မိုချန်ဂလာဘတ် အသင်းတွေက ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ် ထားပြီ ဖြစ်တဲ့ လူငယ်လေး အန်ကီတီယာ ကို အသင်းမှာ ဆက်လက် ထိန်းထား နိုင်ဖို့ အာဆင်နယ် တို့ ကြိုးပမ်း သွားမယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ယူဗင်တပ် ၃ သင်း တို့ရဲ့ ဥရောပ စူပါလိဂ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူခံ ဝင်မှုကို ဥရောပ ခုံရုံး က ပယ်ချ လိုက်ပြီး အမှုကို ပလပ် လိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
UEFA ဟာ စူပါလိဂ် ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ငြင်းဆန် နေတဲ့ အဆိုပါ ၃ သင်းကို ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ရီးရဲ ဆိုဆီဒက် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရပြီး အဆင့် ၂ နဲ့ ရာသီပိတ်သိမ်းဖို့ နီးစပ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အတွက် တလုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုး ကိုတော့ တိုက်စစ်မှူးကြီး အော်ဘားမီးယန်း က သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသင်းကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဇန်နဝါရီ ကနေ အခုချိန်ထိ ၁၁ ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထား နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ချဲဆီး ကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ Broughton အဖွဲ့ နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ ဆရီနာ ဝီလီယံ နဲ့ လီဝတ် ဟာမီလ်တန်
Next Article တန်ဟတ် သက်သေပြရမယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ် #ကာရေဂါ